Fanamby lehibe momba ny fizahantany eropeana nasongadina tao amin'ny Forum Slovenian
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Slovenia » Fanamby lehibe momba ny fizahantany eropeana nasongadina tao amin'ny Forum Slovenian
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Slovenia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Fotoana izao hiatrehana ny lesoka amin'ny indostrian'ny fizahantany izay nateraky ny fanitarana tato anatin'ny 50 taona lasa ary hanovana ny fizahan-tany ho orinasa matanjaka kokoa, nomerika ary tafiditra ao anatiny.
Bled Strategic Forum dia fihaonambe iraisam-pirenena any Centrals sy Eropa atsimo atsinanana.
Ny areti-mifindra COVID-19 dia nametraka fanontaniana maro momba ny fizahantany.
Mila jerena indray ny anjara asan'ny fizahantany amin'ny sehatra EU.
Ny Forum Strategic Bled dia nivoatra ho fihaonambe iraisam-pirenena lehibe any Eropa afovoany sy atsimo-atsinanana. Ny andiany faha-16 dia natao tamin'ny 31 Aogositra - 2 septambra tamin'ny endrika hybrid. Ny tontolon'ny fizahantany natao tamin'ny 2 septambra dia nampivondrona ireo manam-pahaizana ambony avy any Slovenia sy ireo andrim-panjakana malaza, ao anatin'izany ny EC, UNWTO, WTTC, OECD, ETC, HOTREC, ECM, hiady hevitra momba ny hoavin'ny fizahan-tany (eropeana).
Manam-pahaizana iraisam-pirenena sy sloveniana, vahiny, tontonana ary solontenan'ny fizahantany Sloveniana no niresaka tamin'ny minisitry ny fampandrosoana ara-toekarena sy ny teknolojia Zdravko Počivalšek, Tale jeneraly ho an'ny tsena anatiny, indostria, fandraharahana ary SME ao amin'ny kaomisiona eropeana Kerstin Jorna, talen'ny Slovenian MSc. Maja Pak, talen'ny departemantam-paritry ny Eropa any UNWTO Prof. Alessandra Priante ary talen'ny birao nasionalista mpizahatany any Portugal ary filohan'ny Vaomieran'ny fizahantany eropeana (sns) Luis Araújo.
Ny areti-mifindra COVID-19 dia nametraka fanontaniana maro momba ny fizahantany, anisan'ireo maika indrindra ny fahavelomana sy ny fahasitranana, miaraka amin'ny fanovana ny indostrian'ny fizahantany ho lasa maharitra sy maharitra kokoa. Na eo aza ny toe-javatra sarotra, mirongatra ny vinavinan'ny tombam-panantenan'ireo andrimpanjakana fizahan-tany iraisam-pirenena lehibe. Ny tontolon'ny fizahan-tany amin'ity taona ity dia niresaka ny fanontaniana Inona no hoentin'ny ho avy amin'ny fizahantany eropeana.
Nanaiky ny tontonana fa nisy fiatraikany lehibe tamin'ny indostrian'ny fizahan-tany ny areti-mandringana ary nametraka fanamby maro, ary koa ny fotoana mety. Fotoana izao hiatrehana ny lesoka amin'ny indostrian'ny fizahantany izay nateraky ny fanitarana tato anatin'ny 50 taona lasa ary hanovana ny fizahan-tany ho orinasa matanjaka kokoa, nomerika ary tafiditra ao anatiny. Ny fehin-kevitra lehibe nofaritana tao amin'ny tontonana dia:
Ny fahatokisan'ny mpizahatany ny fitsangatsanganana dia mila hatsangana indray.
Ny protokolon'ny fitsangatsanganana sy ny fifandraisana ary ny fandrindrana eo amin'ireo Fanjakana Mpikambana momba ny fameperana ny dia, ny fitsapana COVID ary ny fitsipiky ny quarantine dia mila hatsaraina.
Ilaina ny tondrozotra ho an'ny tetezamita maharitra.
Ilaina ny tondro fampisehoana vaovao.
Ny fanovana nomerika ny indostrian'ny fizahantany dia mila tohanana sy hampiroborobo.
Ilaina ny famatsiam-bola sy ny famatsiam-bola amin'ny famatsiam-bola ho an'ny fivezivezena amin'ny sehatry ny fizahantany.
Ny tetezamita DMO amin'ny andraikitr'izy ireo hanamora ny fizotran'ny tetezamita indostrialy ho an'ny maitso, tafiditra ary ny nomerika dia mila tohanana.